Mandehana any amin'ny orinasa - Yangzhou qiangjing fanatanjahantena entana Co., Ltd.
Fanaraha-maso ny kalitao ilaina amin'ny sakafo
Ny tranokalanay dia mividy ny lamba vita amin'ny fiarovana amin'ny fanatanjahantena. Hanana fepetra takiana samihafa ny teknolojia ho fiarovana ny fiarovana arakaraka ny fanatanjahan-tena samihafa. Misafidiana indrindra araka ny faneren'ireo mpiaro amin'ny tonon-taolana sy ny hozatra. Ny mpividy dia takiana amin'ny fividianana marika manokana.
Misy karazany telo miaro fanatanjahan-tena amin'ny orinasa ataonay: mpiambina voarohirohy, mpiaro ny fingotra NEOPRENE, mpiaro fehiloha vita amin'ny elastika.
Fitaovana fiarovana miaro fanatanjahan-tena an-trano / gym
Ny akora amin'ny ankapobeny dia kofehy vita amin'ny landy na mifangaro, izay ametahana amin'ny milina mivalona boribory ary avy eo hatsangana mba hamolavola. Ny fitaovam-piarovana vita amin'ny kofehy amin'ny ankapobeny dia mety amin'ny fitaovam-piarovana mahazatra fanatanjahantena mahazatra ary tokony hampanafana ny tonon-taolana.
Fitaovana fanatanjahan-tena avo lenta
NEOPRENE dia fitaovana mpiaro tsara. Ny lamba dia manana elastika sy fofona tsara. Izy io dia afaka manome tsindry tsara amin'ny tonon-taolana sy taolana hozatra. Izy io dia manana fampisehoana tsara fiarovana ary mety amin'ny fanatanjahantena avo lenta.
Ny fitaovana mety indrindra ho an'ny fanatanjahantena ivelany
Ny mpiaro bandage elastika dia vita amin'ny fehin-kibo vita amin'ny polyester sy vita amin'ny vy, izay esorina amin'ny halavany samihafa arak'izay ilain'ny faritra hafa amin'ny vatana. Ny gony mahery manjaitra sy manjaitra dia ampiasaina hanamboarana ny mpiaro.
Ny mpiaro ny bandage dia mora rivotra, afaka manamboatra ny tsindry maimaim-poana ary manana fahatapahan-drivotra tsara. Izy io dia azo ampiasaina ho fiarovana ara-panatanjahantena na ho fehikibo vonjy maika. Fitaovana tsara ho an'ny fanatanjahantena ivelany。
Ny vokatra rehetra momba ny orinasa eto amintsika dia voafehy mafy araka ny fenitra eoropeana sy amerikana, ary mifanaraka tsara amin'ny fenitry ny fanatanjahantena miaro amin'ny fanatanjahantena iraisam-pirenena izy.
Ny vokatra fiarovana amin'ny fanatanjahan-tena lehibe: ny valahany, ny tànana, ny palma, ny lohalika sy ny satroka ary ny fitaovana fiarovana: tsy marary, maharitra, fiarovana, faritra fiarovana, fanatanjahantena, hery manohana / fampisehoana, vokatra fiarovana fanatanjahantena CE, fanamarihana marika / marika fampitandremana / Manova lalana ...
Ny vokatra rehetra ao amin'ny efitrano Sample dia voasedra mafy rehefa mivoaka ny orinasa.